လမ်းများကို ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဆဲဆိုခြင်း၊ ကျောက်ခဲ လေးခွများဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းသည် မှားယွင်းပါသည်။သို့သော် ထိုသို့ လုပ်ရကောင်းလားဟု သေစေလောက်သော လက်နက်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းသည် ပို၍ မှားယွင်းပါသည်။ – H2Oupdatenews
လမ်းများကို ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဆဲဆိုခြင်း၊ ကျောက်ခဲ လေးခွများဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းသည် မှားယွင်းပါသည်။သို့သော် ထိုသို့ လုပ်ရကောင်းလားဟု သေစေလောက်သော လက်နက်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းသည် ပို၍ မှားယွင်းပါသည်။
oungmarine11@outlook.com 04/03/2021	No Comments
( မတ်လ – ၀၄၊ ၂၀၂၁ ) လမ်းများကို ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဆဲဆိုခြင်း၊ ကျောက်ခဲ လေးခွများဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းသည် မှားယွင်းပါသည်။
သို့သော် ထိုသို့ လုပ်ရကောင်းလားဟု သေစေလောက်သော လက်နက်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းသည် ပို၍ မှားယွင်းပါသည်။
Road closures; Insulting security forces., shoot with stones and catapults is wrong.
But it is even more wrong to shoot them with lethal weapons.
Previous Previous post: အာဆီယံနိုင်ငံထိပ်သီးများ အလွတ်သဘောစည်းဝေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံအကြပ်အတည်းအဖြေရှာရေး ခိုင်မာသည့် ဘုံသဘောတူညီမှု မရရှိ။ဒေါ်စုအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုလွှတ်ပေးရန် အားလုံးသဘောတူခြင်း မရှိ၊ ဒေါ်စုအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့သည်ဆိုသော နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲ ကွဲလွဲချက်များကို အာဆီယံက စုံစမ်းစစ်ဆေးလို
Next Next post: အမေရိကန်က နှစ်ချီလစ်လျုရှု့ခံရပြီးနောက် မြန်မာတွင် အာဏာသိမ်းအကြပ်အတည်း ကြီးထွား။ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် စစ်ရေးအရစွက်ဖက်ခြင်းနှင့် အာဏာရှင်အစိုးရများအား အင်အားသုံးဖယ်ရှားခြင်းကို ဘိုင်ဒင်အစိုးပြုလုပ်မည်မဟုတ်ဟု ကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရှင်းလင်း၊ ကန်နှင့် R2P အစဉ်အလာ